トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Isigaba recovery ngokubanzi, nesendlu pa, osemqoka-ukubona indlela
※ kwakhona last
pa parlour Nceda thelekisa ku njengoko isimo lonke ushishino kuba nkampani yorhwebo kufuneka abe nenzuzo yonke imihla. Ukuba ucinga njalo, kodwa le nguqulelo nako ukujonga ukuba sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe imini yonke, phakathi kwabo, imini kukuba zokulindela inzuzo enkulu kunesiqhelo, kuya kuba njalo mhla ukuqokelelwa kwazo ekubhekiswe kuyo pa parlour. Ngomhla enjalo ukuqokelelwa a, ukuze angabi ilahleko enkulu, makhe sijonge indlela yokubona ukuba intando wayeza suku luye wachacha.
kwakhona elibe pa ukuya bonke, ndicinga ukuba kukho ngokuqinisekileyo weqiniso usuku. Pa onendawo komhla ukuqokelelwa kwazo, wabona iivenkile ezininzi, ndoxelelwa ngubani kwisiqingatha sesibini enyangeni. Le nto iya kwahluka ngokuxhomekeke ixesha ezivenkileni zeziganeko kunye Xintai indawo. Indlela ukuchonga iintsuku ezimbalwa ezilandelayo sithuba bachache, wena uzobe uhlengahlengiso isikhonkwane. imigca umda
, ezifana uphazamisa, kodwa uphawu kwexesha kakhulu iinzipho uhlengahlengiso alulame, kukho inxalenye endifuna ukuba aqhubeke ebuka kwenye. Ngoko ke, ukuba oluntlawulo nangoko nya, kukuba okanye hayi. Kwiikota pa ukuba intlawulo, ebizwa ngokuba Y.. Le ukusika Y., lenza uhlengahlengiso uzipho ngaphandle kokuqala, kwaye Chirase ibhola, yindlela ukunciphisa umlinganiselo ukuba bangene ukuqala kunye umhlaseli.
Kwakhona, ukuba Re Chirase ibhola, baye mandundu ibhola emva jackpot, mna ibhola ngaphandle shwaka ngoko nangoko. Kwisigaba ekuphulukenwe nalo le pa parlour, iye yaba useko eninzi hlengahlengiso nail a. Ukwahlula phakathi isikhonkwane, kodwa kunzima kakhulu, umzekelo Toka esijikeleziswa izihlandlo ezininzi, ukuba imbono yokuba ibhola ngokukhawuleza nya, ungenza ngcono kalukhuni Ukuba umdlalo aqhelekileyo pa. Ekubeni bathi iimpawu kwenzeka hlengiso kuzipho sokubuyisa ixesha ekuphulukenwe nalo, nceda ukhumbule zonke iindlela. Kwimeko
Hanemono, kufuneka ube ngokukodwa kusetyenzwe esweni iindawo ezinjalo. Ukongeza, kwimeko ezifana kumatshini CR, ngoko kukho kwakhona Kungenzeka ukuba yolungelelaniso ngendlela Horukon, malunga bekuya kuba kuhle ukuba sihlale naphantsi oluphezu intloko.
veki nangeeholide zoluntu, pa of nani kuvunwa njengoko uyazi Ivenkile iya kuba mininzi. Oku ngakumbi, ezifana kwiivenkile sikhululo kunye iivenkile achumayo, ngokufuthi uya badla ukugcina umthengi lowo nkqu evekini. Ezifana neevenkile ezisezidolophini kule ngxokolo abalindelekanga ukuba ukubaleka phakathi evekini, ukubuyisela zokugalela omnye ngeMigqibelo nangeeCawa, kukho mhlawumbi kwakhona kwiivenkile ukuphumeza ishishini, njengaleyo eziqokelelweyo.
Kwaye, eya kubuyiswa umhla na, nesendlu pa, kukho umhla ukuba umiselwe. Ngoko ke, Xintai kwikona ukususela ngethuba leeholide Iveki Golden kunye zokuvulwa de olandelayo ezilungiswe nayo, kodwa kude ekupheleni kwenyanga ukusuka 25 kwinyanga nganye kakhulu. De 25 nganye ngeeholide ngenyanga ezilandelelanayo, ekubeni babone irayisi kunye neentengiso eliphezulu ngeniso gross kulindeleke, iya kusoloko wachacha ecaleni pa parlour.
Ukongeza, abo banomdla kwiimagazini, njl naye Xintai nto, ngoko udlala kwesakho, akufuneki ukuba phandle. Oomatshini Bill kufuneka kulandwa, iya kufunyanwa kuma umdlalo kunqandwa. Xintai kusenokuqhutywa ukubetha ngosuku lokuqala Xintai, oko kukuba kukho amathuba ukuba imiba ibalaseleyo kubetha ngexesha xa uzolile kancinci. Nengqiqo i
pa parlour komhla ukuqokelelwa kwazo, nceda uqaphele ukuba imali eyilahleko. Noko ke, ukuba okanye hayi umhla ukuqokelelwa kwazo, siye sabona nje, ngokuba mna andazi kakhulu, iya kuphuma iimfuno ukubetha ngokupheleleyo. Ukuze phelisa ubuncinane lotyalo-mali, iivenkile le meko kunye nezikhonkwane Ngokusesikweni, uye waba kuyabonakala ngisho kancinane. Ngoko udlala, et al., Kuye akukho mfuneko ukuyicima. Oomatshini Bill kufuneka kulandwa, iya kufunyanwa kuma umdlalo kunqandwa. Xintai kusenokuqhutywa ukubetha ngosuku lokuqala Xintai, oko kukuba kukho amathuba ukuba imiba ibalaseleyo kubetha ngexesha xa uzolile kancinci. Nengqiqo i
pa parlour komhla ukuqokelelwa kwazo, nceda uqaphele ukuba imali eyilahleko. Noko ke, ukuba okanye hayi umhla ukuqokelelwa kwazo, siye sabona nje, ngokuba mna andazi kakhulu, iya kuphuma iimfuno ukubetha ngokupheleleyo. Ukuze phelisa ubuncinane lotyalo-mali, iivenkile le meko kunye nezikhonkwane Ngokusesikweni, uye waba kuyabonakala ngisho kancinane.